Dowladda Ingiriiska oo ku dhawaaqday in ay Sare u qaadday heerka Feejignaanta ammaanka Kadib Weerarkii Manchester.
Wednesday May 24, 2017 - 15:36:25 in Wararka by Super Admin
Dowladda Wadanka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday inay sare u qaaday heerka feejignaanta ammaanka ee dalkaasi maalin kadib weerarkii ka dhacay magaalada Manchester, kaas oo sababay dhimashada 22 qofood, ayna ku dhaawacmeen inkabadan 50 qofood oo kale
Dowladda Wadanka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday inay sare u qaaday heerka feejignaanta ammaanka ee dalkaasi maalin kadib weerarkii ka dhacay magaalada Manchester, kaas oo sababay dhimashada 22 qofood, ayna ku dhaawacmeen inkabadan 50 qofood oo kale.
Haweeneyda Ra'iisul Wasaaraha ka ah Dalka Britain Taresa Meey ayaa tilmaantay in baaritaannada horudhaca ah ee la sameeyay ay muujinayaan suurtagalnimada inay jirto koox la shaqeyneysay Ninkii ay Dowladdu sheegtay inuu fuliyay weerarkii ka dhacay magaalada Manchester, kaas oo magaciisa lagu sheegay Salmaan Ramadaan oo 22 jir ah, islamarkaana asal ahaan kasoo jeeda dalka Liibiya.
Shir Jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada London kadib marka uu soo dhamaaday Shir ammaanka looga hadlayay ayaa Taresa Meey waxa ay ku sheegtay in Wasiirka difaaca uu aqbalay dalab kaga yimid Booliiska oo ahaa in Ciidamada Meliteriga laga qeyb geliyo sugidda ammaanka ee dalka.
Tallaabtan ayaa waxay tahay mid Naadir ka ah Dalka Ingiriiska, waxaana Dowladdu ay sheegtay in la qaaday kadib markii qiimeyn rasmi ah lagu sameeyay Khatarta Wadanka kaga soo wajahan weerarrada kaligii-duulnimada ah ee ay qaadayaan dhallinyarada Muslimiinta.
Weerarkii habeenkii Isniinta ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska ayaa ahaa weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo bishii July ee sannadkii 2005-tii, xilligaas oo magaalada London ay ka dhaceen dhowr Camaliyadood oo Istish-haadi ah oo lala beegsaday Xarumo Tareennada laga raaco oo kuyaalla magaaladaasi, waxaana qaraxyadaasi ku dhintay inkabadan 50 qofood, halka ay ku dhaawacmeen Boqollaal kale.